Elektromassazhery Foot: Uhlolojikelele, izici, izinhlobo nokubonakaliswa
Kuze kube manje, hhayi eseyintsha, kodwa kudivayisi kunalokho ezithakazelisayo elektromassazhery umlenze. Kuhloswe for ukunakekelwa nasemilenzeni ephansi, futhi yenza imisebenzi eminingi ebalulekile, kuye ngokuthi model. Amadivayisi anjalo kumelwe abe khona kuwo wonke ekhaya, ngoba nabo ungakhululeka ngemva komsebenzi onzima wosuku, uhambo olude noma travel nasezitimeleni.
Umlayezo - ke Liyindawo inqubo enhle newusizo, lapho kakhulu sithuthukiswe kwegazi, kuzole futhi kuthuthukisa impilo, kodwa futhi iyehlisa isikhathi nokuvuselelwa for ezilimele kwemisipha izicubu.
Inketho ekahle eziphumulele kuyinto elektromassazhery umlenze ekhethekile, okuyinto ephumula hhayi nemilenze kuphela, kodwa kuwo wonke umzimba iyonke. Kaningi abantu akhononde ngokuntuleka isikhathi, ngenxa yalokho abazange uthole ukuvakashela umbhucungi womzimba futhi ujabulele le nqubo emangalisayo, okuyinto inzuzo wokuqala ekhaya elektromassazhery. Ngoba njalo engenzeka ukuthola isikhathi futhi esimweni ukhululekile ukuba uphumule, ukucabanga ngezinto ezinhle.
Elektromassazhery Foot iyithuluzi eliyingqayizivele ngalo ukufeza kuyothuthuka isimo kanye nokusebenza hhayi kuphela nemilenze, kodwa futhi wonke umzimba ngokuphelele. Lo mphumela ibangelwa ngokusebenzisa ama-apharathasi ukuchayeka ngamaphuzu ukutshopa, okuyinto zitholakala kwi izinyawo.
Siyabonga kubo, ungakwazi ngcono ukusebenza inhliziyo, isisu, wamathumbu, uhlelo lymph nokunye. Ngakho, usebenzisa idivayisi massage elisizayo, kunethuba ukuchitha ngokwanele yokwelapha esebenza kahle kakhulu izifo ezihlukahlukene kuleli khaya.
onobuhle ezahlukene zenzelwe kuhambisane netinhloso, ngakho umphumela kuyoba ngezinga elithile ezahlukene. Kufanele kuqashelwe ukuthambekela jikelele ukuthi kungalindeleka kusukela massage yezingalo nemilenze engezansi:
nokuncipha ukukhathala ubuhlungu ezinyaweni;
ehle ukuvuvukala, eyabonakala ngenxa umonakalo mechanical ezicutshini futhi izinqubo sokugembula ka etymology ezahlukene;
ngcono wawubona kwegazi kanye lymph kwegazi, ngakho umzimba kancane kancane beze ithoni bese buzoba buncane ukungenwa amathonya ahlukahlukene omubi;
kukhona ukwelashwa articular qualitative.
Indlela ukhetha umuntu oyisibonelo
Yiqiniso, ukhetha elektromassazhery Foot kufanele kuphela uholwe konke ukusebenza kunesidingo. qiniseka ukuba baqonde ngaphambi kokuthenga umshini, ziyini, yini umsebenzi wakhe.
Lapho edala amamodeli we abakhiqizi kagesi zisebenzisa ezihlukahlukene imiqondo, ngalokho lunikeze idivayisi kuphela esisethubeni lokwenza, okuzokwenza ube kuyobuthinta eliphakeme zokwelapha kanye Lentulo. Phakathi onobuhle lanamuhla ethandwa, ungakhetha kumadivayisi amaningi, esekelwe zinhlobo ezilandelayo imiphumela yilezi:
Kuphela ukuqonda isimiso wokusebenza ngayinye yalawo mathuluzi, ungakhetha kudivayisi ihlangabezana ngokugcwele izidingo nezifiso umthengi.
Njengomthetho, elektromassazhery umlenze akuyona nje ezingeni ithuluzi asizayo, esetshenziselwa ochwepheshe ukuze ngcono umsebenzi wabo siqu. Eqinisweni imishini ngempela ezimele futhi ephumelelayo, okuyinto ihluke nomunye muntu tekusebentisa target uya khona. ububanzi okubanzi massagers emakethe ikuvumela ukuthi ukhethe idivayisi engcono lapho ludingeka endabeni ethile. Ngokulandelayo, sitshelwa ngo uhlu elektromassazhery onobuhle, enikela nokwelapha kanye eziphumulele umphumela.
Elektromassazhery ngoba "Bliss" imilenze - uyisibonelo yesimanje futhi ethandwa ngempela, okuyinto uhlobo isiteji ezakhi eziningana asebenzayo letsintsa ngco izicubu ngesikhathi massage. Le divayisi abantu abaningi kangangokuthi abane izindlela othomathikhi wokusebenza, ngamunye esiklanyelwe ukufunda othize unyawo ndawo.
Njengoba ukuqinisekisile etholakalayo ku elektromassazhery umlenze "Bliss" izimpendulo, ngosizo massage akakwazi kuphela ayeke, kodwa futhi Amadolo nezandla. Kulokhu, abasebenzisi lona umshini, baziswa kuphela.
massager Tray kuyinto apharathasi qualitative yenzelwe ukusetshenziswa ngabanye. Isebenza ku izindlela ezintathu, kuhlanganise massage: vibration, Bubbles, nemiphumela ezishisayo. Ribbed phansi ethangini ngokuphelele, ngakho kukhona ukushukuma ezengeziwe zezinyawo.
Isilawuli lokushisa ivumela ukufudumeza amanzi, kanye Phiko iqoqo Imibhobho esemzimbeni, ezisiza baphathe massage ezijulile kakhulu futhi isuswe nge stop ezingemnandi izingqimba keratinized we epidermis.
Lokhu umlenze elektromassazhery, okuyinto intengo izinga kuyavumelana ngokuphelele, futhi libukeka iqanda futhi has amabili akhethekile umlenze ukuvuleka. I-apharathasi ifakwe ezinamasondo zezinhlobo ezahlukene senzelwe imiphumela ebalulekile noma ukutshopa.
Ngaphezu kwalokho, kukhona elektromassazhery isiguqo, senyusa izinga lomfutho womoya phakathi naleyo nqubo, kanye uhlelo Ukushisa, kuba nomphumela omuhle kwegazi. Nge izilungiselelo manual, ungakhetha ukuthi wayengenye yamadoda amane izindlela okujula ngenjongo ethile.
Unix Air Nethezeka
Compact elektromassazhery Foot umlenze libukeka isibhakela, has a isisindo okungenani kanye Ubukhulu ingenkulu kakhulu. Isihloko oyinhloko umthelela sinikezelwa "igalofu", okuyinto kufanele zigqokwe izinyawo, bese beqala ukuba sikhukhumale enze lymph amanzi imilenze. Le divayisi kufanelekile kwelulama yokulimala mechanical, ephelezelwa ukuvuvukala emisipheni.
Lokhu reflexology elektromassazhery Foot kuyinto uhlaka, okuyinto ukunciphisa ukukhathala stop nokungcebeleka okwalandela. It uba phezu esishintshashintshayo reflex futhi inikeza ukwelashwa olunzulu flatfoot.
Inzuzo yayo eyinhloko ukuthi isakhiwo egoqekayo esilungele bewathwele zokuthutha. Le divayisi kwakungadingi umthombo wamandla, kulula ngokwanele ukuhlanza kanye nomklamo emnandi ejabulisa umsebenzisi. Ideal for abantu abanezifo we amalunga nemisipha. Ngenxa yokuba khona izingxenye ezinkulu it is hhayi Kunconywa izingane.
Lapho ukhetha massager akufanele uholwe izincomo kwezinye amakhasimende, kungcono ubonane nodokotela. Uyobabonisa ncamashi imodeli ukuthi kangcono umuntu, unikezwa ekuxilonga, imisebenzi yansuku zonke, ubudala namanye amaqiniso.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuthola kuphela labo amadivayisi eziye zabhekana ukuhlolwa okukhethekile kanye anganikeza izitifiketi izinga. nobuchwepheshe ezingekho emthethweni kunoma isiphi isimo ayikwazi Kunconywa ukuba isetshenziswe, kusukela imikhiqizo efana aqinisekisiwe ukulimaza umuntu. Futhi ukuze ugweme nemiphumela engemihle, kubalulekile kuphela ukuze zidinga nomthengisi imibhalo efanele eqinisekisa ukuphepha kudivayisi.
Ingozi kanye contraindications
Nokho, leli thuluzi isimangaliso njengoba elektromassazhery umlenze, Ubuye Izimo. Ungayisebenzisi umshini uma izifo elandelayo:
ukulimala ingxenye umlenze, okuyinto sizothinta massager;
Izibuyekezo ezingezinhle mayelana inkomishi lendze akukwazi nganoma iyiphi indlela njengoba nebubi kuzo okunzima ukubathola. Abantu bakhuluma nge lezi amadivaysi omuhle kakhulu, ngoba nabo ungakwazi ngempela uphumule bese uphonsa zonke izinkinga zokuphila kwansuku zonke okungenani imizuzu embalwa.
Ngakho, abadlali njalo uhlanganyele, futhi ngakho bahlale ngaphansi kokucindezeleka, uhlushwa yokuthi akulula ukuze uphumule kubo. Kodwa le nkinga kalula ukuphatha elektromassazhery - akusiyo nje esifushane kunciphisa ukukhathala imisipha ukungezwani, kodwa futhi normalizes ukugeleza kwegazi. Futhi abantu njalo ukukhononda ukuvuvukala ekugcineni ukukhohlwa ngakho lapho uzuza idivayisi esachazwa ngokuyisimangaliso. It hhayi kuphela kusiza ukwenza ngcono isimo izinyawo, kodwa futhi imizwa namandla futhi omuhle.
Indlela ukuqeda ukuncela.
Microcurrent agesi Abantu
Alexandrite Laser: Izinzuzo kanye nokubuyekeza
Beauty Salon Nuvo: Indawo Services
"Londa" - i-palette yezimbali ezisebenza
Izibuyekezo truthful abanikazi imoto Chevrolet Cruze
Iyini i-pityriasis: imbangela yalesi sifo
Inkume ekhaya - umngane ezinesihlungu umndeni
Indlela yokwenza isheke kusayithi phezu emhosheni?
Qamba Eric: Inani, uhlamvu nesiphetho
Elena Nikolaeva - umdlali waseshashalazini. Filmography, biography kanye nempilo yakho.
Fish Dory: incazelo yefomu, ukuziphatha eziphila
Lapho earplugs ngoba ingalali - isidingo
Kare okokugqamisa: izinguqulo, amacebiso awusizo
Thyristor Converter: izici ukusebenza nokuthuthukiswa amathemba
Perpetuum mobile nge odonsa?